Screw sy Vatofantsika
Tady tariby sy tariby hareza
Welded Wire Mesh dia vita amin'ny fantsom-boaloboka vy ambany kalitao ambany, ary avy eo mafana nandroboka nandrisika, plastika mifono plastika nopetahany plastika fitsaboana plastika.
Mba hahatratra ny tampon'ny harato, ny harato fanamiana, ny fahombiazan'ny milina eo an-toerana dia tsara, milamina, fanoherana ny toetr'andro, fisorohana ny harafesina tsara.
Welded tariby harato fomba:
* Naroboka mafana nandritry ny fanenomana.
* Herinaratra nandritry ny fanenomana.
* PVC mifono.
Ny kojakoja dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy vovoka mifono izay mahatohitra sy maharitra.
Ny fefy misy tampon-scrolled ho an'ny haingon-trano, plastika miloko maitso nopetahany tariby nandrisika, Ampiasaina amin'ny haingon-trano.
Fitaovana: Mae misy tariby vy avo lenta.
Fanodinana: fanenomana sy famolahana
Tombontsoa azo avy amin'ny vokatra Anti-harafesina, fanoherana taona, porofon'ny masoandro, sns
Ny fefy an-tsaha dia vita amin'ny tariby vy mahery. Izy io no fefy tsara indrindra hiarovana ny ala ahitra, ny ala, ny làlambe ary ny tontolo iainana.
Ny fitomboan'ny firafitra toradroa, izay fampiasa indrindra amin'ny renirano, amoron'ny morontsiraka, afaka manakana ny moron'ny renirano tsy ho tototry ny onja, ny rivotra sy ny onja. miaraka amina rafitra miovaova sy permeabilité matanjaka, izay ahafahana mampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry voajanahary haingana.
Square Wire Mesh dia vita amin'ny tariby vy nandrisika na tariby vy tsy misy fangarony, izy io dia be mpampiasa amin'ny indostria sy ny fananganana mba hanasiana vovoka varimbazaha, hanivana ranoka sy entona ho an'ny tanjona hafa toy ny mpiambina azo antoka amin'ny valin'ny milina.
Karazan-tariby Wire Mesh:
Hexagonal Wire Mesh dia ampiasaina amin'ny famahanana akoho, gana, gisa, bitro ary fefy zoo, sns.
Azo amboarina anaty boaty gabion izy io - iray amin'ireo vokatra tariby malaza indrindra amin'ny fanaraha-maso ny tondra-drano. Avy eo dia asiana vato ao. Ny fametrahana gabion dia manamboatra rindrina na banky manohitra ny rano sy ny tondra-drano. Stainless Steel Hexagonal Wire Mesh dia atsofoka ao anaty vorona akoho amam-borona koa ho an'ny fiompiana akoho sy akoho amam-borona hafa.
Ny vavahady dia vita amin'ny akora avo lenta avo indrindra sy ny fizotran'ny welding. Nasiana fofona alohan'ny famonoana ho an'ny fiarovana avo kokoa amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina toy ny takelaka fefy. Ny vavahadintsika dia misy singa avo lenta sy mateza ary safidy isan-karazany hidin-trano hifanaraka amin'ny fampiharana hafa.
Karazana vavahady zaridaina:
* Vavahady tokana elatra.
* Vavahady elatra roa
Diameter mahazatra Nail: 1.2mm-6.0mm Halavany: 25mm (1 mirefy) -152 mm (6 santimetatra) Fitaovana: Q195 Fitsaboana ambonin'ny tany: Voalamina, Zinc Plated / Black Zinc Plated fonosana famonosana: 1. Amin'ny ampahany betsaka 2. Ny entana entana 3 Fonosana fandefasana: baoritra 25 kg / CTN, sns. 4. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Diamètre Nail Concrete: 1.2mm-5.0mm Halava: 12mm (1/2 santimetatra) - 250mm (10inches) Fitaovana: # 45 vy fitsaboana ambonin'ny tany: Zinc, Black Zinc Plated / Black Zinc Plated fonosana fonosana: 1 ....
Izy io dia mpitatitra fiakarana ho an'ny zava-maniry voaloboka sy ahitra fiakarana. Ampiasaina be izy io ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, fanaingoana zavamaniry, zavamaniry poti anaty trano, voninkazo sy fambolena zaridaina noho ny fampiasana azy miovaova sy samihafa, maharitra, miondrika miaraka amin'ny endrika ary miondrika miaraka amin'ny fironana.
Lahatsoratra fefy: Ny paingotra dia ampiasaina amin'ny tetikasa ivelan'ny trano manomboka amin'ny birao ka hatramin'ny fefy.
Karazana paositra: Paositra Euro, paositra T, paositra Y, paositra U,Star picket.
Euro Pipe Post dia vita amin'ny fantsom-boribory, galvanized ary vovoka mifono amin'ny RAL6005 maitso.
Ny tariby misy alikaola dia karazana fitokana-monina sy harato fiarovana voaforon'ny teknika fanenomana isan-karazany amin'ny alàlan'ny tariby miolikolika amin'ny tariby lehibe (kofehy) amin'ny alàlan'ny masinina tariby.
Ny fomba fitsaboana an-tampon-tany dia voaforona ary mifono plastika PVC.
Misy karazany telo ny tariby misy barbed:
* Tady tariby miolakolaka tokana
* Tariby misy tadiny miolakolaka
* Tariby misy tadiny voaolana
© Copyright - 2019-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra mafana - Sitemap